पोखरामा १८ तल्ले अपार्टमेन्ट : बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै संयोग जुराइदै « News24 : Premium News Channel
पोखरामा १८ तल्ले अपार्टमेन्ट : बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै संयोग जुराइदै
पोखरा, असोज १६ । अब हिमाल हेर्न होइन, अग्ला र गगनचुम्बी घर हेर्न पोखरा जाम भन्ने भनाइ बोक्ने भएको छ पोखराले । अहिले पोखरामा करीब छ हजार घर मापदण्ड बिपरित रहेका छन ।
पोखरा महानगरले पोखरामा बन्ने घरहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्न गत बैशाखमा बिज्ञ समूह गठन गरेको थियो । मापदण्ड बिपरित लेक साइडमा नौ तल्ले घर बनाउने व्यक्ति भरत पहारी नै बिज्ञ समुहमा संयोजक रहेका छन । पछिल्लो समय चर्चाको बिषय बनेको पोखराका घरको मापदण्डलाई विभिन्न तरिकाले हेर्न थालिएको छ ।
उसो त भौगोलिक हिसाबले निकै नै संवेदनशील मानिएको पोखरामा अग्ला गगनचुम्बी महल बन्न हुन्छ या हुदैन ? प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ । यतिबेला सर्वत्र चर्चाको बिषयमा रहेको छ पोखराको लेकसाइडमा बन्दै गरेको बी एण्ड बी अपार्टमेन्टको । एकातिर महानगरले मापदण्डका कुरा गरिरहेको यो समयमा १८ तल्ले अपार्टमेन्ट बन्ने चर्चाले महानगरले मापदण्ड के कसरी तय गर्ने हो भन्ने सबैको चासोको बिषय बनेको छ । गत बैशाखमा महानगरले भरत पहारीलाई संयोजक बनाएर विज्ञ समूह गठन ग¥यो ।
सो विज्ञ समुहले महानगरमा घरको मापदण्ड के कति बन्नुपर्ने भन्ने प्रतिबेदन पेश गर्यो जसले पोखरामा ४० तल्ले सम्म घर बन्न मिल्ने प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उनै बिज्ञ समुहका संयोजक भरत पहारीले मापदण्ड मिचेर पोखराकै लकेसाइडमा ९ तल्ले घर बनाएका छन । यता अर्को मापदण्ड बिपरित घर बन्ने चर्चा वी एंड बी अपार्टमेन्टको रहेको छ । बी एंड बी अपार्टमेन्टका सन्चालक बिमल बस्यालले एशियाकै उत्कृष्ट अपार्टमेन्ट बनाउने हल्ला गरेर तारे होटलमै बूकिंग खुल्ला गरेको केहि समयमा महानगरको स्वीकृति नै नलिई कसरी बूकिंग खुल्ला हुन सक्छ भन्ने प्रश्न जानकारहरुले उठाएका छन् ।
विमल बस्यालले ३६ रोपनी जग्गामा १८ तलाको बी एंड बी अपार्टमेन्ट बनाउने पत्रकार सम्मेलन गरेर नै केही समय अगाडि घोषणा गरेका थिए । घोषण गरेको केही दिनमा नै बस्यालले उक्त जग्गा सम्याउन तर्फ लागेका छन् । अहिले जग्गा सम्याउने कामलाई बस्यालले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
उनले देश, विदेशमा अपार्टमेन्टको प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् भने अपार्टमेन्टको डिजाइन नै कस्तो हुने हो भन्ने सार्वजनिक गरेका छन् । एकातिर ८ अर्वको लगानीमा १८ तलाको भवनमा ४ सय ६४ वटा अपार्टमेन्ट बनाउने बस्यालको योजना रहेको छ भने अर्काेतर्फ पोखरा महानगरको मापदण्ड अनुसार पोखरामा ३ तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाउने नियम रहेको छ ।
उसो त पोखरामा ३ तले भन्दा अग्ला घर नभएका होइन्न् तर एक्कासि १८ तले भवनको सपना देखेका बस्यालको सपना पुरा हुन्छ त ? पोखरामा सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुको वर्चस्व नै रहेको छ र अघिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्ने हो भने उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष जो जो भए उनीहरुले नै आफुखुसी मापदण्ड मिचेर गगन चुम्बी महलहरु बनाएका छन् ।
अहिले फेरी मापदण्डको जिम्मेवारी पाएको महानगरले विज्ञ समुह गठन गरेर १८ तले महललाई स्वीकृती दिने नयाँ तरिका अपनाएको छ । विज्ञ समुहको ४० तलाको मापदण्ड प्रतिवेदन र बस्यालको १८ तलाको सपना कहिंकतै बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै भएको त हैन ?